Ukuzilungisa amaGloves Mitts Abakhiqizi nabahlinzeki | I-China Grooming Gloves Mitts Factory
Ukuzilungisa Isilwane Glove
Iminwe yethu emihlanu yokulungisa igilavu ​​ayigcini nje ngokusiza ekunciphiseni izinwele ezindizayo emoyeni, ibuye ivuselele amafutha wesikhumba futhi ithuthukise ukuthamba kwengubo yezilwane ezifuywayo futhi ikhanye.Lamagilavu ​​asusa izinwele ezikhululekile bese uhlikihla izilwane zakho ezifuywayo ngobumnene.
Izeluleko ezithambile zale minwe emihlanu yokuhlanza isilwane segilavu ​​zilungiselela izilwane ezifuywayo kalula, ama-nub obude obulungile enza izinwele kube lula ukuzikhipha uzilahle.
3. Ngaphezu kwalokho, noma ngabe unesihlakala esincane noma esikhulu, leli glavu lokuzilungisa lenziwa lilingane. Ibhande lekhwalithi liyenza ifaneleke ngokuphelele kuwo wonke amasayizi esihlakaleni.
Iphelele ezinjeni ezinamakhanda amade noma ezimfushane nezisontekile namakati.Kuyisusa esikhulu sezinwele zezilwane kubo bonke osayizi nezinhlobo.
Pet Izinwele Ukususwa Glove
Izeluleko ze-Rubber zinikeza i-massage yokuphumula emnene. Le glavu yokususa izinwele yesilwane ilungele izilwane ezifuywayo ezibucayi nezincane.
2.Okuqukethwe yileli gilavu ​​yokususa izinwele kufana nezimo futhi kuyaphefumula, ibhande lesihlakala lilingana nabaninizilwane abaningi.
Uhlangothi lwe-3.Glove's velor linciphisa ngempumelelo inani lezinwele elisele ngemuva kwifenisha, izingubo noma emotweni.
I-4.Igilavu ​​yokususa izinwele ezifuywayo isusa ukungcola, i-dander nezinwele ezikhululekile kwikati, inja, ihhashi noma esinye isilwane.
Igilavu ​​lokuhlikihla isilwane sasekhaya
Izilwane ezifuywayo zidinga ukuzilungisa njalo ukugcina amajazi esesimweni sokuchopha phezulu. Ukuzilungisa ngaphandle kwamandla kususa izinwele ezifile nezingenalutho. Igilavu ​​lokuzilolonga ngesilwane esifuywayo lipholisha futhi lenze libe lihle ijazi, lisuse izigaxa futhi livuselele izintambo zezinwele, likhuthaze impilo nokubuyela emgqonyeni.
Isikhumba Sokugcobisa Izinja
1.Ngenye yezindlela ezilula futhi ezimnandi kakhulu zokulungisa izilwane ezifuyiwe. Iglavu elichitha isilwane lezinja lilungisa izigaxa namata amabi ngenkathi kuphakanyiswa ukungcola nodander ejazini.
I-wristband eguquguqukayo igcina iglavu iboshwe ngokuphepha esandleni sakho ngenkathi uzilungisa.
Ukwakheka kwezikhonkwane zekhanda eliyindilinga kunengqondo, okungageza izilwane ezifuywayo ngenkathi kunomsebenzi wokubhucungwa.
4.Igilavu ​​elichitha izinja ligcina impilo yalo ihlanzekile ngokunikeza izidingo zokuzilungisa zansuku zonke.
Glove Yokugeza Izinja
Izindwangu zenjoloba engokwemvelo egilavu ​​yokuchitha inja zisusa izinwele ezixegayo futhi zibhucabhuce isikhumba,
Indwangu ye-Eco isula ukuhlanza ukungcola okuzungeze izinyawo nobuso.
I-strap eguquguqukayo ifanelana nakho konke ukwakheka nobukhulu besandla.iglavu yokuchitha inja ingasetshenziswa imanzi noma yomile, izinwele ziyaxebuka nje.
Iglavu elichitha inja yokugeza lihlala isikhathi eside futhi lihlala isikhathi eside futhi lingagezwa ngomshini.